Avy tamin'i Andriamiaramanjaka Ny Kaloy sy Tavaradrano
Andriamaheritsialaintany teny Amboantany?
Andriamiaramanajaka sy Ramerina no niteraka an’Andriamaheritsialaintany
Mpitaritafika sy mpapandry tany no tena antony nametrahana an’Andriamaheritsialaintany ho tompo tao Antanamalaza. Vahoaka be sy miaramila miisa 450 lahy (miaraka aminy vadiaman-janaka sy andevo maro) no napetrak' Andrianampoinimerina ho nentiny tao. Tsy isan'ny Imerina enina tokoio taloha satria Antanamalaza dia renivohitra Bezanozano.
Havan-drain' Andriamaheritsialaintany ny andriana Bezanozano tompotany tao Antanamalaza taloha, ary nisy fotsy sy mainty ny vahoaka tao izay mpihavana amin' Ambohimalaza ny sasany.
Teny Amboatany Andriamaheritsialaintany no nanorina fonenana, satria efa nisy rova mora hiarovan-tena tao, sady karazana toby miaramila io tanàna io.
Ny rain’ Andriamaheritsialaintany dia mpiray ray amin’Andrianampoinimerina. Samihafa reny izy ireo : ny renin’ Andriamaheritsialaintany dia Ramerina fa ny Andrianampoinimerina kosa dia Ranavalona.
Andriamaheritsialaintany sy ireo mpiray reny aminy, ka eny Antanamalaza, Sahafa, Amboatany sy Fiakarana ny momba azy. Andriamiaramanjaka mbola nanambady hafa, ka ankoatra ireo lasa any Antananarivo dia ao Ambohimanga, Kaloy, Anjafy, sy toerana hafa ny misy ny momba azy.
Andriamaheritsialaintany dia natsangan-dRakotomavo sy Renibodonimerina ho zanaka, ka ireto no zanany ao aminy tetiarana mpandova ao Ambohimanga: Rabodonimerina sy Andriamaheritsialaintany ary Rafaravavinandriambelomasina.
Razakanavalondralambo dia niteraka lahy tokana: Andrianavalonjanahary. Andrianavalonjanahary dia tsy niteraka ka nanangana an’Andriamaheritsialaintany ho mpamelomaso sy hiaro ny lova.
Andriamaheritsialaintany sy Rafaravavimasina niteraka and-Ramanitrasina (vehivavy io) teraka tao Kaloy ary napetraka ao Fiakarana Ivato, ka eny Fiakarana Ivato ny momba azy. Rafaravavimasina dia nanambady an-dRalainanahary (zanak’Andrinanampoinimerina) avy eny Kaloy taloha.
Andriamaheritsialaintany koa dia nanangana ho zanany an'i Rahetilahy zanak'i Rafaravavimasina sy Ralainanahary ka eny Ambohimasina izy no nampandovainy .